सर्जक जमघट साहित्य श्रृङखला सम्पन्न Kasthamandap Daily
सर्जक जमघट साहित्य श्रृङखला सम्पन्न
काठमाडौं । समाजको सर्जक जमघटको श्रृङखला डा. घनश्याम परिश्रमीको प्रमुख आतित्यथमा सम्पन्न भएको छ। अतिथिहरूमा डा. विदुर चालिसे, पोष्टराज चापागाईं, कलानिधि दाहाल र सुनिल अधिकारी रहनुभएको उक्त कार्यक्रममा सर्जकहरुले ३ वटा मुक्तक, एक गजल र एक कविता मध्ये कुनै एक विधामा रचना वाचन गरेका थिए ।
रचनाहरू कर्णप्रिय रहेका कुरा प्रमुख अतिथि डा. घनश्याम परिश्रमीले बताउनु भएको थियो । कार्यक्रम मा करिव तीन दर्जन जति रचनाहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व गीता उप्रेतीले गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रम सन्चालन विनोद खत्रीले गर्नुभएको थियो ।